Sweden oo 200 qof ka soo qaadaysa Libya | Somaliska
Dowlada Sweden ayaa noqoneysa wadankii ugu horeeyay ee gacan u fidiya qaxootiga u badan Soomaalida iyo Eritriyanka ee ku xayiran dhibaatada ka taagan Libya. Laanta Socdaalka (Migrationsverket) ayaa sheegtay in 200 qof laga soo qaadaya ka hor inta aan la gaaray xagaaga. Dadkaan ayaa la sheegay in inta badan ay ka soo jeedaan geeska Afrika. "Dadkaan waa kuwo xaalad adag ku sugan. Qaar badan ma haystaan meel ay ku noqdaan, waxaa noo furan fursad aan ku caawin karno" ayuu yiri agaasimaha Laanta Socdaalka Dan Eliasson. Waqtiga dhabta ah ee dadkaan la soo qaadayo lama shaacin balse waxay noqoneysaa ka hor inta aan la gaarin sammarka. Dowlada Sweden ayaa la shaqeyneysa hayda UNHCR si ay u kala saaraan dadka la soo qaadayo. Sweden ayaa bishii Maarso ku dhawaaqday in ay qaxooti ka soo qaadeyso Libya.
Dowlada Sweden ayaa noqoneysa wadankii ugu horeeyay ee gacan u fidiya qaxootiga u badan Soomaalida iyo Eritriyanka ee ku xayiran dhibaatada ka taagan Libya. Laanta Socdaalka (Migrationsverket) ayaa sheegtay in 200 qof laga soo qaadaya ka hor inta aan la gaaray xagaaga. Dadkaan ayaa la sheegay in inta badan ay ka soo jeedaan geeska Afrika.
“Dadkaan waa kuwo xaalad adag ku sugan. Qaar badan ma haystaan meel ay ku noqdaan, waxaa noo furan fursad aan ku caawin karno” ayuu yiri agaasimaha Laanta Socdaalka Dan Eliasson.
Waqtiga dhabta ah ee dadkaan la soo qaadayo lama shaacin balse waxay noqoneysaa ka hor inta aan la gaarin sammarka. Dowlada Sweden ayaa la shaqeyneysa hayda UNHCR si ay u kala saaraan dadka la soo qaadayo.
Sweden ayaa bishii Maarso ku dhawaaqday in ay qaxooti ka soo qaadeyso Libya.